ယူဂိုစလဗ် မစ်-၂၉ လေယာဉ်များသည် ယခင်က တိုက်ပွဲဝင်မှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့သော်လည်း ယူဂိုစလားဗီးယားပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားလာချိန်တွင် မြေပြင်ပစ်မှတ်များအတွက် အဓိကတိုက်လေယာဉ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၁၉၉၁တွင် ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ၊ အိုစီဂျက်မြို့အနီး စီဖင်လေယာဉ်ကွင်းတွင် ခရိုအေးရှားတို့အသုံးပြုသော Antonov An-2 လေယာဉ်အများအပြားသည် မြေပြင်ပေါ်မှာပင် မစ်-၂၉ တိုက်လေယာဉ်များ၏ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရသည်။ မစ်-၂၉ လေယာဉ်များမှာမူ တစ်စီးမှဆုံးရှုံးခြင်းမရှိခဲ့ပေ။  မစ်-၂၉ လေယာဉ်များသည် ဖယ်ဒရယ်ယူဂိုစလားဗီးယားသမ္မတနိုင်ငံခေတ်အထိဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည်။ တိုင်းပြည်အပေါ် ကုလသမဂ္ဂ၏လက်နက်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် မစ်-၂၉ လေယာဉ်များ၏အခြေအနေပိုဆိုးလာသည်။ ၁၉၉၉တွင် မဟာမိတ်တပ်များစစ်ဆင်ရေးမစတင်မီ ယူဂိုစလဗ် မစ်-၂၉ များသည် ၁၂ နှစ်သက်တမ်းရှိပြီး အပိုပစ္စည်းများပြတ်တောက်ပြီး ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှုမပြုလုပ်နိုင်ပေ။ ၁၉၉၉ မတ်လတွင် ယူဂိုစလဗ်လေတပ်တွင် မစ်-၂၉ တိုက်လေယာဉ် ၁၁ စီးရှိသည်။
ဆားဘီးယားနှင့်မွန်တီနီဂရိုးလေတပ်သည် ကျန်ရှိသော မစ်-၂၉ လေယာဉ်ငါးစီးကို စစ်ပြီးခေတ်တွင် အနည်းငယ်ဆက်လက်ပျံသန်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ နွေဦးတွင် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့သောကြောင့် မစ်-၂၉ လေယာဉ်များအသုံးပြုမှုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။  ၂၀၀၇ တွင် မစ်-၂၉ လေယာဉ်ငါးစီးလုံးအား ရုရှားသို့ပို့ပြီးပြုပြင်အဆင့်မြှင့်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ တွင် မစ်-၂၉ တစ်စီးပျက်ကျပြီး လေယာဉ်မှူးနှင့်မြေပြင်ပေါ်ရှိစစ်သားတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။
အသုံးပြုလျက် ရှိသော နိုင်ငံများ
"Yugoslav & Serbian MiG-29s." Air Combat Information Group, 30 November 2003. Retrieved: 14 October 2009.